TBIT waxay ku biiri doontaa EuroBike ee Jarmalka Sebtembar, 2021
Eurobike waa bandhiga baaskiilka ee ugu caansan Yurub. Inta badan shaqaalaha xirfadlayaasha ah ayaa jeclaan lahaa inay ku biiraan si ay u ogaadaan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan baaskiilka. Soo jiidasho leh: Soo-saareyaal, wakiilo, tafaariiqlayaal, iibiyayaal ka kala yimid adduunka oo dhan ayaa ku soo biiri doona bandhigga. Caalami: Waxaa jira 1400 bandhig...
Alibaba Cloud waxay suuqa soo gashay wax ku saabsan baaskiilka elektaroonigga ah ee smart
Xalka smart e-bike xal smart e-bike kulanka ku saabsan isbeddelka ku saabsan e-baaskiilka waxaa qabta Alibaba Cloud iyo Tmall. Boqolaal shirkado ah oo ku saabsan baaskiilka elektaroonigga ah ayaa ku soo biiray oo ka hadlay isbeddelka. Iyadoo ah bixiyaha software/hardware ee Tmall e-bike, TBIT ayaa ku soo biirtay. Alibaba Cloud iyo Tma...
Sannadka 2021, baaskiillada casriga ah ee e-baaskiilada waxay noqdeen "macnaha" noocyada waaweyn si ay ugu tartamaan suuqa mustaqbalka. Shaki kuma jiro in qof kasta oo hogaanka u qaban kara jidka cusub ee sirdoonka uu ku qabsan karo hoggaanka wareegan dib-u-qaabaynta habka warshadaha elektaroonigga ah. smart e-bike xal...
"Gaarsiinta gudaha magaalada" - waayo-aragnimo cusub, nidaamka kiraynta baabuurta korontada ku shaqeeya oo caqli leh, hab ka duwan isticmaalka baabuurka.
Baabuurka korantada sida qalab safar, ma nihin qariib. Xataa xoriyada baabuurka maanta, dadku waxay wali ku hayaan baabuurka korantada sida qalabka safarka ee dhaqameed. Hadday tahay safar maalmeed, ama safar gaaban, waxay leedahay faa'iidooyin aan la barbar dhigi karin: habboon, degdeg ah, ilaalinta deegaanka, lacag badbaadin. Howe...